उपत्यकामा मात्रै १२ हजार कोरोना संक्रमित, ८४ जनाको मृत्यु ! « MNTVONLINE.COM
उपत्यकामा मात्रै १२ हजार कोरोना संक्रमित, ८४ जनाको मृत्यु !
काठमाडौँ । काठमाडौ उपत्यकामा मात्र हालसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमितको सङख्या १२ हजार पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले काठमाडौ उपत्यकामा हालसम्म १२ हजार २४८ जनामा सङ्क्रमण देखिएको बताए ।
अहिले दैनिक ४०० को हाराहारीमा उपत्यकामा सङ्क्रमित बढ्न थालेका छन् । आजैमात्र उपत्यकामा ५१२ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन । काठमाडौमा ४८०, भक्तपुरमा ४३ र ललितपुरमा २९ जना सङक्रमित फेला परेका छन । काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म ८४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा काठमाडौंका ६२ जना, भक्तपुरका १३ जना र ललितपुरका ९ जना रहेका छन् ।